Qaar ka mid ah ururada Australiyaanka ah, ee ka soo horjeedka Dukaanka Apple oo ku yaal Fagaaraha Fagaaraha ee Melbourne | Waxaan ka socdaa mac
Dukaanka ay Apple damacsan tahay inay ku furto iyadoo laga filayo weyn Melbourne, ayaa laga helay mucaaradka ururada maxaliga ah. Waa hagaag ha ka fiirsan in dhismaha Yara astaanta, oo ku yaal Federatión Square, ay tahay inay martigeliso xarun Apple ah, sababtoo ah wicitaanka wicitaanka ee sababi doona booqashada kumanaan iibsadeyaal iyo isticmaaleyaal ah.
Dhinaca kale, dawladda hoose waxay taageertaa soo-jeedinta iyada oo ay ugu wacan tahay koboca dhaqaale ee ay tahay in ganacsigu keeno ama garaacista saamaynta ganacsiyada kale ee ku dhow dukaanka Apple. Laakiin dhinaca kale, ururada maxalliga ah ayaan ka raalli ahayn goobta uu ku yaal Apple Store.
En Waxaan ka socdaa mac waxaan kugula socodsiinaynaa gudaha xiriir la leh qorshayaasha Apple ay ku dhiseyso dukaanka tafaariiqda. Markii hore, Dhismaha Yarra waxaa ku yaalay ururo ama munaasabado kala duwan, sida Meesha Bandhiga Melbourne.
Tan iyo markii la daabacay warka, ururo kala geddisan ayaa abaabulay tallaabada la qaatay. Ururadan waxay leeyihiin shabakadu furantahay Jooji Apple, halkaasoo ay damacsan yihiin inay ku joojiyaan duminta dhismaha shirkadda Apple. Waxqabadyada waxaa ka mid ah codsi loo maro hay'adda Change.org. Codsigan wuxuu uruuriyay in kabadan € 50.000 oo saxiix, sida ay sheegeen qaar kamid ah warbaahinta takhasuska leh ee Mareykanka. Ururkan:
Dowlada iyo Apple midkoodna ma uusan shaacinin qiimaha uu ku kacayo dhismaha, laakiin waa in loo cadeeyaa qof walba in luminta dhismahan muhiimka ah dartiis ganacsi shirkadeed ay tahay qalloocinta waxa Federation Square iyo Melbourne u taagan yihiin.
Isla codsigan, faa iidooyinka cashuurta ee Apple ku leedahay Australia ayaa laga wada hadlay markale, ka hooseeya 2% faa'iidooyinka. Waxay ku andacoonayaan in, In kasta oo Apple ay wax ku biiriso khasnadaha dowladda, haddana xaq uma siineyso inay la wareegto goobaha dadweynaha.
Ururada kale ee dhismaha, iyo sidoo kale Machadka Qorsheynta ee Australia iyo Machadka Australiya ee Architects Architects, waxay tixgelinayaan in dhismaha ay tahay inuu ilaaliyo qaab dhismeedka hadda jira. Sida la tilmaamay:
Ma jiro fursad la-tashi bulsho oo ka dhacay, horumarka noocan oo kale ah ayaa ka dhacay fagaaraha caanka ah ee Melbourne.
Apple ayaa wajaheysa go'aan weyn: sii wado difaaca deegaanka dabiiciga ah ama go'aansado in dib u habeyn lagu sameeyo aag duug ah, oo ay aad u qiimeeyaan muwaadiniinta deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qaar ka mid ah ururada Australiya, oo ka soo horjeedda Apple Store oo ku taal fagaaraha fagaaraha Melbourne